Altlọ ọrụ Semalt na Ọrụ ya
Have nwere webụsaịtị, ma n'ezie ịchọrọ ịkwalite saịtị gị, ị na-echekwa atụmatụ dị a toaa iji tinye ma ọ bụ nke a na-emegharị na ebe nrụọrụ weebụ gị n'ụzọ pụrụ iche Echegbula; anyị zubere maka gị ihe niile.
N'ezie, ebumnuche nke onye ọ bụla nwere azụmahịa n'ịntanetị bụ iji melite ọnọdụ nke saịtị ya na ibe nsonaazụ ọchụchọ. A na-ewere ọnọdụ nke weebụsaịtị ka ọ dị mma mgbe a họọrọ ya na peeji mbụ nke nsonaazụ ọchụchọ. Ma nke a agaghị ekwe omume na-enweghị usoro SEO.
Yabụ, site na nke a, Semalt azụlitela ọrụ kachasị mma maka weebụsaịtị niile bụ: SEO (njikarịcha ọchụchọ) na Nchịkọta Weebụ. Na mgbakwunye, Semalt na-enye mkpọsa abụọ SEO, dị ka AutoSEO na FullSEO.
Mana tupu ozi niile ahụ, ka anyị kọọrọ gị ihe Semalt bụ; Ihe na Semalt mere. Na ọtụtụ ihe ndị ọzọ gbasara Semalt. Ka a pụọ!
Ntọala na Septemba 2013, Semalt bụ ụlọ ọrụ IT na-eto ngwa ngwa. Isi ụlọ ọrụ ya dị na Kyiv, Ukraine. Dịka ụlọ ọrụ dijitalụ zuru oke, anyị na-enye ndị ọchụnta ego, webmasters, nyocha, na ndị ahịa ahịa ụzọ ọhụrụ iji jiri mkpọsa weebụ maka ụdị azụmahịa ọ bụla n'ụzọ dị irè.
Ihe mejuputara Semalt bu ndi okacha amara, ndi nwere ikike, di omimi, na ndi n’enye obi uto bu ndi butere otutu oru ngo IT n’ime ndu. Anyi a na - emezikwa ikike anyị kemgbe afọ iri ugbua ma nwee ike ikwenye n’enweghi obi abụọ na onye ọ bụla n’ime anyị bụ ezigbo aka azụ ahịa ya.
Mgbalị anyị jikọrọ ọnụ mepụtara otu ọrụ weebụ kachasị ọhụrụ na ọrụ ọhụụ. Obi dị anyị ụtọ na anyị nyefere gị ya taa. Site na teknụzụ a na enyemaka anyị, ị ga-enwe ike ịmata ike saịtị gị zuru oke.
Ka anyị rụchara ọrụ na nyocha ọtụtụ afọ, anyị nwere nghọta zuru oke banyere ihe ọ dị mkpa ka eme, oge, na otu. Ebumnuche anyị bụ inyere gị aka iru ogo ọhụrụ, ma na Google na ndụ gị. Soro anyi rụọ ọrụ maka ihe ịga nke ọma.
Dịka ị siri hụ, anyị bụ ezigbo eziokwu ma dịrị njikere iso gị rụọ ọrụ n'oge ọ bụla nke ehihie ma ọ bụ n'abalị!
Ugbu a, dịka ịmatakwu banyere Semalt , ka anyị bulie ihe ọ na-enye dị ka ọrụ.
Ihe na Semalt mere.
Gịnị ka anyị ga-eme? Anyị na-ewere azụmahịa gị na ọkwa nke ọzọ! Anyị na-emeghe ọwa ahịa ọhụụ ma nyere gị aka ịme asọmpi ahụ. Semalt na-enye gị ọrụ kachasị mma nke dị mkpa maka ntụgharị mkpokọta nke weebụsaịtị gị, ya bụ: SEO na nchịkọta.
Ya mere, ekwesiri iburu n'uche na teknụzụ SEO bụ ụzọ akụnụba ma dị irè iji bulie ndị na-ege ntị na ahịa ahịa. Ya mere, Semalt kpebisiri ike ịkwalite ọhụụ nke saịtị gị na idobe weebụsaịtị gị na TOP nke Google. Inwekwu ndị ọbịa - ego karia! Ya mere, ka Semalt sonyere gị site na ọrụ ya bụ isi:
Kedu ka usoro njikarịcha igwe na-achọ ọrụ si arụ ọrụ?
Dị ka ihe ọ bụla nwere ike ime ka ị nweta nnukwu ego, SEO nwere ike ịbụ usoro mgbagwoju anya.
N'ezie, ịnwere ike ịchọ okwu ma mepụta SEO-kachasị akara ngosi META n'onwe gị site na iji ngwa efu, wee nọdụ ala chere ka anwansi ahụ mee. Agbanyeghị, nke a abụghị otu esi enweta nsonaazụ SEO mara mma.
Mostzọ a na-ahụkarị bụ iji were ndị ọkachamara na-anaghị akwụ ụgwọ. Agbanyeghị, ịgaghị amata ma ha ga - ekwe gị nkwa ịmere arụmọrụ zuru oke.
Otu ụzọ, yana ikekwe ọ kachasị mma maka ndị bịara ọhụrụ, bụ ịchọta ụlọ ọrụ iji mezuo SEO maka azụmahịa gị. Ha nwere ike ịnye ezigbo ọkwa nke njikarịcha n'ime na mpụga, ihe na-atọ Google ụtọ n'ezie.
Workingrụ ọrụ na ụlọ ọrụ dị otú a, a ga-eduga gị n'ọnọdụ niile nke ezigbo SEO:
Nchọpụta Keyword (s): A gaghị emepụta mkpụrụokwu niile nhata. Willfọdụ agaghị arụ ọrụ maka weebụsaịtị gị, mana ndị ọzọ nwere ike ịrụ ọrụ ebube. Nke a bụ ihe mere eji họrọ ha amamihe.
Nchọpụta nka na ụzụ: Ala ọrụ nka a ka ọ dị ka emeziwanye saiti saịtị gị ka ọ bụrụ maka nyocha. Ọ nwere mmetụta dị egwu na ohere gị iji merie ekele ha.
Nlele nke mpụga: Mpụga ma ọ bụ njikọ ụlọ. Ọ bụ maka ịnweta njikọ ndị ọzọ na weebụsaịtị gị. Ọtụtụ SEO na-ezo aka na ya nanị dị ka ihe ndabere maka atụmatụ SEO, ha yikwara na ha ziri ezi (anyị ga-alaghachi n'oge ahụ).
Mmepe na-esochi: Nọgide na-agbalị imeziwanye weebụsaịtị gị maka ndị ọbịa. Ọ bụrụ na ọ masịrị ha, ndị ọrụ ọchụchọ ga-eme otu ihe ahụ.
Site ugbu a gaa n'ihu, azụmaahịa ọ bụla dị n'ịntanetị kwesịrị ịdị na-achọ weebụsaịtị nke ha maka ngwa ọchụchọ ha na-erughị ma ọ bụ obere. N'ezie, ọ bụrụ na ha na-echegbu onwe ha maka ego ha na enweta.
SEO bụ naanị n'ihi na ọ na-eme ka okporo ụzọ weebụ dị larịị kwupụta weebụsaịtị gị yana "setịpụrụ ntọala" iji mee ka ọnụnọ gị n'ịntanetị dị ike.
Enweghi ihe omuma n’eduba n’enye ahia gi. Mụrụnụ ma na-achịkwa azụmaahịa gị! Kwa ụbọchị, anyị na-ewetara gị data nyochara maka ọganihu gị.
Kwa ụbọchị, anyị na-enyocha ọnọdụ saịtị ahụ ma nyochaa ọganihu ha. N'ezie, Semalt na-achịkọta ozi banyere ndị asọmpi gị, n'ezie ọ bụ naanị ma ọ bụrụ na i kpebiri inyocha saịtị ha.
N'adịghị ka saịtị ndị ọzọ, anyị na-emelite ọnọdụ gị kwa oge, na-enye gị ohere pụrụ iche iji soro ọnọdụ saịtị gị n'ịntanetị n'oge ọ bụla n'ụbọchị ma hụ mgbanwe ndị kachasị ọhụrụ.
A na-ewetara gị nyocha niile site na akụkọ nyocha zuru ezu nke gbanwere na usoro PDF ị nwere ike ibudata na saịtị gị. Enwere ike izipu akụkọ ahụ na adreesị ozi-e e gosiri. Nke a na - eme ka ị ghọta ọhụụ maka ọganihu gị.
Dika odi nma, ịlụ ọgụ ka ị bia n’elu Google dị mkpa. Agbanyeghị, ọ dị ezigbo mkpa ka ị nọrọ n'ọkwa ruo mgbe ebighi ebi, ebe ndị na-asọmpi gị na-achụ gị dịka ọdụm agụụ ji. Iji gbochie gị ịdaba n'ọnyà a, anyị edobela nchịkọta weebụ anyị.
N'ezie, nchịkọta weebụ anyị bụ ọrụ nyocha ọkachamara maka ndị webmasters na-emeghe ọnụ ụzọ maka ohere ọhụụ iji nyochaa ahịa, lelee ma ọnọdụ gị na ndị asọmpi na data nyocha ahịa.
Ka a gwa gị. Bido na iji nyocha weebụ anyị ugbu a!
Ndụmọdụ okwu: Anyị ga - enyere gị aka ịhọrọ isiokwu ahịa dabara adaba.
Akụkọ ọnọdụ: Lelee ma nyochaa ọnọdụ nke Keywords gị ogologo oge.
Ọnọdụ okwu: nleba anya kwa ụbọchị banyere ọnọdụ saịtị gị na sistemụ nyocha.
Nchọpụta Asọmpi: Nyocha ma nyochaa ọnọdụ ndị na-achọ asọmpi.
Nchịkwa nke ụdị gị: Ozi nyocha a na-egosi ọnụego nke ewu ewu gị, na-enye gị ohere ịmebe usoro mmekọrịta ọnụ zuru oke.
Onye nyocha weebụsaịtị: Nnyocha nyocha nke saịtị gị zuru ezu na mmepe saịtị yana ihe ndị ụlọ ọrụ SEO chọrọ.
Kedu mkpọsa SEO na-eme Semalt?
Dị ka anyị gwara, Semalt na-enye mkpọsa abụọ SEO, dị ka AutoSEO na FullSEO. Ka anyị kọọrọ gị gbasara ha ugbu a!
N'ezie, emepụtara mkpọsa a maka ndị chọrọ ịbawanye ahịa ha n'ịntanetị na-enweghị amataghị banyere SEO ma, ha achọghị itinye ego buru ibu na-enweghị nsonaazụ. Mgbe ahụ mkpọsa AutoSEO bụ mkpọsa kachasị mma maka gị. Chọpụta ihe kpatara ya.
Kedu ihe kpatara ịchọrọ AutoSEO?
Mgbasa ozi nke AutoSEO egosiputala ya kemgbe otutu saịtị, yabụ emela ihe dị iche na saịtị gị. Chọpụta ụfọdụ nsonaazụ AutoSEO:
Agụnyere ihe niile na mkpọsa a, AutoSEO gụnyere:
Nhọrọ nke ezigbo ezigbo mkpụrụokwu
Iwulite njikọ nke saịtị ebe a na-akwụ ụgwọ
Chọọ maka weebụsaịtị
Mmelite nke ọnọdụ
Ugbu a, oge eruola ịmalite njikarịcha SEO ma melite ogo Google gị na AutoSEO.
Nhọrọ isiokwu maka nkwalite SEO
Mwepụta nke njikọ a na-ewu ewu iji rụọ ọrụ
Nkwado njikwa onwe onye
Nkwalite SEO na ebe ọ bụla na asụsụ ọ bụla
Họrọ atụmatụ zuru oke maka ebumnuche gị, Semalt nwere afọ 1, ọnwa 6, ọnwa 3, na ndebanye aha ọnwa 1 , n'ihi na Semalt na-agbakọọ ego niile.
FullSEO , bụ usoro dị elu iji sonyere TOP nke Google. N’ezie, ọ na - agụnye ọtụtụ arụmọrụ na njikarịcha na mpụga nke saịtị gị, na - enye gị nsonaazụ mara mma n’oge dị obere.
Iji ruo n’elu Google, ịchọrọ oge na akụrụngwa. Ka o sina dị, anyị emeela atụmatụ SEO dị elu nke ga-enyere gị aka ịbawanye ndị na-ege ntị, jikọta okporo ụzọ, na ire ahịa weebụsaịtị gị n'oge dị mkpụmkpụ oge ị ga-eji FullSEO: LEGOD N UGBUA!
Ya mere, enweghi obi abụọ ọ bụla, ịmalite mkpọsa nke FullSEO gị ugbu a ma nọrọ n'ụzọ gị na TOP nke Google!
FullSEO bụ mkpọsa zuru oke ma dị irè iji nyere aka azụmaahịa gị ka ọ na-eto n'ime obere oge kachasị mma iji mee ka ndị na-ege ntị na ebe nrụọrụ weebụ gị jiri ọkwa dị elu nke SEO:
AKW REKWỌ UKWUKA
Na FullSEO, gini ka inara?
Ihe njiri mara elu
Itinye ego bara uru
Nsonaazụ dị ogologo ma dị irè
Semalt nwere ọtụtụ narị ndị ahịa nwere afọ ojuju
Kemgbe afọ 2013, omume anyị niile bụ ime ka ọrụ ndị ọzọ dị n'ịntanetị dịkwuo mma. Obi dị anyị ezigbo ụtọ na anyị so na ihe ịga nke ọma ha. Chọpụta n’ebe a afọ ojuju na ihu ndị ahịa anyị site na akaebe ha: +32 akaebe vidiyo, +146 aka edere, yana ikpe +24.
Lee ụfọdụ atụ
Can nwekwara ike ịbụ otu n’ime ndị ahịa ahụ afọ juru
N’ezie, ị chọkwara ịbụ otu n’ime ndị ahịa ahụ afọ juru, yabụ enwere ike. Semalt dị njikere isoro gị site na ọnọdụ gị ugbu a gaa na ogo gị na 10 kachasị elu nke nchọta ọchụchọ Google. Ihe a bụ okwu, dịka ọmụmaatụ, na Mr Greta, CEO nke Zaodrasle, onye toro nke ukwuu na ọrụ SEO nke Semalt. Nke a bụ ihe o kwuru banyere ahụmịhe ya na Semalt: "Ezigbo ozi dị mma! Enwere m afọ ojuju, ihe ndị sitere n'okike na-abawanye; ọtụtụ isiokwu dị na 10. Isi Ivan Konovalov bụ nnukwu onye njikwa, ọ na-agbasi mbọ ike, m nwara abụọ ndị ọzọ tupu ya, ma ha abụghị ndị ọma.
N'ime ihe dị ka ọnwa ise nke mkpọsa SEO, anyị jisiri ike na-enwe ọganihu ma hụ na Zaodrasle nwere ike ịnweta ntọala na Google TOP-5 na TOP-3. Pịa ebe a ka ị hụ nsonaazụ a:
Yabụ ọ bụrụ na ị nwere mmasị na nsonaazụ ndị a, ị nwere ike ịga na saịtị anyị ma chọta ọtụtụ ozi gbasara ndị ahịa anyị. Enwere ike ịchọta ikpe ahụ ebe a.
Ọ dị ezigbo mkpa ịmara na Semalt bụ ụlọ ọrụ nwere ahụmahụ nke nwere ihe karịrị afọ 16 nke ahụmahụ SEO na otu ndị ọkachamara karịrị 120. Yabụ na anyị na ndị ahịa anyị na-akpakọrịta mgbe niile iji zaghachi mkpa ọ bụla na-esite na ha. Yabụ, na weebụsaịtị anyị, ịnwere ike izute ndị otu anyị n'oge ọ bụla.
Enweghị ihe mgbochi asụsụ na Semalt
Enweghị mgbochi asụsụ, maka na agbanyeghị asụsụ ị na-asụ, ndị isi anyị ga-ahụrịrị otu asụsụ ha na-asụ. E kwuwerị, anyị na-asụ Bekee, French, Italian, Turkish, na ọtụtụ asụsụ ndị ọzọ.
Eziokwu na-atọ ụtọ banyere akụkọ Semalt ma ọ bụ Turbo
N’afọ 2014, anyị na-akwaga n’ụlọ ọrụ ọhụrụ wee chọta ya n’ite osisi ochie. Onye nwe ụlọ ọrụ gara aga hapụrụ ya ma jụ iweghara. Ya mere anyị hapụrụ onwe anyị mbe wee kpọọ ya Turbo. Anyị chọpụtara ụzọ e si eri ma na-elekọta nduru, anụ ụlọ ọfịs ọhụrụ anyị kwagara na nnukwu nnukwu mmiri. Kemgbe ahụ, ọ ghọrọ anyị mascot.